Maxamuud Axmed Muuse | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 16
Deegaanku waxa uu ubaahan yahay cilmi aad udheer iyo xeelad aad uqoto dheer. Sida awgeed waxaa haboon in aan kasamayno hordhac, waxa uu yahay deegaan. Aan ina ka iftiinsho duurxul kooban gogol dhigi qormada waxa uu yahay deegaan iyo fahanka guud ee uu deegaanku uqaybsami karo aynu ugu qaadaa dhigaynaa, wuxuuna anbaqaadkeenu noqon doonaa gorfaynteena iyo kala saaridda deegaankeena. Marka arimaha deegaan laga falanqoonaayo inuu dadku faham guud kahaystaan xogaha cilmiga barashada deegaanka, daraasaadka iyo abyanida. Kuwaa soo lagu gorfeeyo jahwareerka iyo isku dhexyaaca deegaanka. Sida loo yareeyo dhibaatada soogaarta deegaanka iyo raadayntooda bini’aadamka iyo sida wax looga badelli …
Marka laga hadlaayo guul waxaa dabataal guul daro. Waxaan rabnaa in aan kala ogaano waa maxay guul, guul darese maxay tahay?Guushu waa markii aad gaarto hadafkaagii iyo yoolkaagii kuu degsana waxaad hanatay guushii. Waxaana gacanta soogashatay shay qaaliya oo ah guul. Guuldaro waa in aad ka miro dhalin waydo hadafkaagi iyo yoolkii kuu degsanaa. Sababtoo ah ma jiro ruux guulaysta mar walba ilaa uu la kulmo caqabado iyo mushkilaad kala duwan. Inbadan waxaad maqashaa guul laakiin miyaad taqaan sida guusha loo gaaro iyo caqabadaha kaa hor imaan kara? Qof walba oo jecel inuu hanto guul waa in uu naf …
Noloshu waa mid saamayn ku leh bini-aadamka, mid waa lagu ciriirshaa midna waa loo waasiciyaa. Dad badan oo dunida kunooli waxay uqabaan in dadka oo dhani dhereg u dhintaan oo aysan jirin gaajo iyo faqritoona. Hadda ka hor waxaa dhacday in gabar uu dhalay madaxweyne ka mid ahaa madaxdii soomaray dalka maraykanka ayaa laga dhaadhicin waayay waxaa jira faqri iyo gaajo. Sida aan ka dareemayno sheekadaa dadku Alle ma simin oo waxaa la yahay shanta farood oo kale. Mid waa taajir oo waxa uu haystaa maal uu sidii uu doono ugu tamashlayn karo, siddii uu doonana ka yeela. Waxaa …
Marka hore qofku waa in uu iswaydiiyaa maxaa tahay adi? Qof noocee ah ayaa tahay? Sidee unooshahay? Maxaa dadka kale kaga duwantahay? Ma qof wanaagsan baatahay mise qof xun? Sidee isku tihiin socdaalka nolosha? Waa kuma qofka aad rabto in aad noqoto? Maxaa naftaada ka badali kartaa? Su’aalahaas iyo kuwo kale oo badan ayaan rabnaa in aan iswaydiino. Haddaba waxaa lagaa rabaa in aad tiraahdo ani waxaan ahay ruux nolosha kaga jira dabaqad hoose, waxaana ahay ruux aan bulshada ku lahayn sucmad, waxaan ahay ruux aan lahayn karti, waxaan ahay ruux nacay nolosha iyo sida aan u noolahay. Waayo …
Waxaan ka imid jaamacadda African University, waa goor galab ah, waxaan ka soo lugeeyay jaamacadda. Kadibna waxaa soo maray jidka Maka-Almukarama ee magaalada Muqdisho. Cabaar markaan haayay ayaan is dhahay ku naso meheradaan xoogaa. Waxaa ii yimid kabal yeerigii waxa uu igu dhahay “maxaan kuu keena dey dalabka?” Waxaan ku dhahay “aboowe waad mahadsantahay, waan soomanahay” Intaas markaan iri ayuu iga tagay. Waxaa agtayda fadhiyay dhowr oday oo sheeko ku haystay. Mid ka mid ah ayaa soo kacay, waxa uu soo qaatay kursi, dheegayga ayuu soo fariistay waa uu isalaamay, waan ka qaaday. Waxa uu iyiri “ma sooman tahay” …
Waxkasta oo lasameeyo waxay leeyihiin qodobo laraaco oo lataaban karo waayo waxaad aragtaa ashyaa badan oo fara ku samays ah oo la sooraacsho tusmooyin ku waas oo ka turjumaya qaabka loo adeegsanaayo. Tusaale ahaan, waxaad soogadatay matoor waxa uuna leeyahay qaab loo isticmaalo matoorka, waxaana kuu fududaynaya waraaqda yar ee la sooraacsho taasoo ku dhan habkii aad u adeegsan lahayd. Haddaba sidaa silamida ayaa socdaalka noloshu ay ubaahan tahay in aad fahanto waxyaalaha lagu gaaro sacaadada nolosha adoo ka duulaya Alle ka baqida iyo waxyaalaha lagaaga baahan yahay. Taqwada Alle: Waxaa qofkasta oo Alle iyo Rasuulkiisa rumeeyay laga rabaa …
Nin xikmad badan ayaa lagu yiri hebelow kawaran xaalkaaga, waxa uu yiri: A). Ilaahay amarkii raac baan kula dhaqmaa B). Naftaydana khilaaf baan kula dhaqmaa C). Khalqigana waanaa kula dhaqmaa D). Adduunyana daruuri baan kula dhaqmaa Waxaan ka faa’idaynaa in waxkasta ay ku xirantahay Alle ka cabsiga oo aan marka hore garano lana nimaano wixii uu Alle nagu farad yeelay. Kadibna aan la dagaalno nafta oo aan kala dagaalno waxkastoo aad jeceshahay waayo naftu waxay rabtaa dhal dhalaalka adduunka, waxay rabtaa in ay raaxaysato, waxay rabtaa in ay ku noolaato nolol tan ugu fiican, waxay rabtaa in aysan cibaadaysan oo …
Waa Maxay Qaneecada? Q.1aad Waxaan haysanaa nimco aan la sookoobi karin laakiin aynaan dareensanayn nicmadaa aan haysano kuna damaashaadayno laakiin waxaad garan xiliggii aad waydo nimcadaas markaasna waxba kuu tarimayso shalayay iyo maxaan uga faa’idaysan waayay. Imisaa ayaad aragtay dad badan oo maal qabeen ahaa oo haatan waxba haysan? imisa ayaad aragtay dad magac iyo maamuus lahaa oo aan maanta dibada laga sooxaraysanayn? Imisaa ayaad aragtay shiikh caalim ahaa oo isbedelay? Imisa ayaa aragtay ruux lahaa caqli iyo xikmad oo waalan oo farihiisa kala ogayn? Imisa ayaa aragtay dad badan ama qabaa’ilo boqortooyooyin ahaa oo maanta jirin? Imisaa …
Qaneecadu waa in aad ku qanacsan tahay waxkasta oo Alle ku siiyo. Tusaale ahaan, Alle waxa uu ku siiyay nimcooyin aad ubadan oo kala duwan sida islaamnimada, lixda lixaad oo lagu dhamaystiray, caafimaadka Alle kugu galadaystay, maalka Alle kugu deeqay, cimriga uu Alle ku siiyay waxaas oo dhan waa nimcooyinka aad haysato waa in aad ku qanacdaa. Dad badan oo dunida ku nool ma fahansana nimcada ay haystaan kumana baraarugsana bal iskaba daaye waxay u hanqaltaagaan wax uu haysto qof kale waayo ma dareensana waxa ay haystaan. Maanta Alle waxa uu ku siiyay laba xubnood oo aad u muhiim …
Siddee uga faa’idaysan kartaa waqtigaa qiimaha leh oo aad haysato? waxaa lagaaga baahan yahay in aad samaysato jadwal midkaas oo kugu hagaya dariiqa kasta oo aad marayso. Tusaale, ka soo qaad in aad haysato 24 saacadood, lix ka mida waad hurudaa, lixka midana waxbaa barataa, lixka midana waa shaqaysaa, lixka midana Alle ayaa caabudaa. Kawaran sida aad udejisatay waqtiga? macquul ma tahay in aad waqtigaaga aad maarayso? Dabcan haa waa ay tahay waayo ardayga waxbarashada ku jiraa waxa uu leeyahay waqti, jadwal udegsan oo uu ku maareeyo waqtiga. Waxa uu wataa goor sheegtiisa “saacadiisa”, waxa u qorshaysan lix saac …